coughing – Healthy Life Journal
နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးချိန်မှာ ဆီးစိမ့်ထွက်နေလျှင်
နှာချေလိုက်ရုံ၊ ချောင်းဟန့်လိုက်ရုံနဲ့ ဆီးတွေစိမ့်ထွက်နေရင် ကိုယ်အလေးချိန် များနေသလား ဆန်းစစ်ပြီး များနေရင် လျှော့ချရပါမယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်ရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရပါမယ်။ ဆီးဝမ်းထိန်း ကြွက်သားတွေ သန်မာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း နှစ်မျိုးစလုံးဟာ ဖိအားကြောင့် ဆီးထွက်တဲ့ ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. လည်ချောင်းနာတာနဲ့ အာသီးရောင်တာက ဘယ်လိုခြားနားမှုရှိပါသလဲ ဆရာ။ A. လည်ချောင်းနာတာ (Sore Throat) ဆိုရင် အာသီးလည်းပါတယ်၊ Phyrax လည်းပါတယ်၊ laryx အသံအိုးလည်းပါတယ်၊ Trachea လည်းပါတယ်။Epiglocyttis...
ရင်ကျပ်သလို ခံစားရတယ် . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. အသက်က ၃၁ နှစ်ပါ။ အစားအသောက်မှားရင် မကြာခဏကျပ်သလို ခံစားနေရလို့ပါ။ ရင်ကျပ်ပန်းနာအကြောင်း သိချင်ပါတယ်။ A. ရင်ကျပ်ပန်းနာသမားက နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အသက်ငယ်ငယ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့ ရင်ကျပ်ရောဂါနဲ့ အသက်ကြီးချိန်မှာဖြစ်တဲ့ ရင်ကျပ်ရောဂါပါ။ အသက်...
ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးစွဲခြင်း (Cough Syrup Addiction)
မေး. သမီးအမျိုးသားက တရုတ်ကထုတ်တဲ့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတစ်မျိုးကို မူးယစ်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲနေပါတယ်ဆရာ။ သူဆေးသုံးတာ တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိပါပြီ။ သမီးသူ့ကိုဆေးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ သူကတော့ ဆေးပြတ်ချင်စိတ်မရှိပါ။ သူအရမ်းမေ့တတ်လာပါတယ်။ ဒီလိုမူးယစ်ဆေးသုံးရင် ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲဆရာ။ သူ့ကိုဆေးပြတ်အောင် သမီးဘေးကနေဘာတွေ အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးလို့ ရပါသလဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ....
၊ မီမိုးမေ ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ မောပန်းတဲ့အပြင် ညဘက်မှာ ချောင်းဆိုးရင် အိပ်မပျော်တာနဲ့ နွမ်းနယ်တာပါ ပိုအဖြစ်များစေပါတယ်။ ချောင်းဆိုးတာ သက်သာစေဖို့ သဘာဝကုထုံးတွေ ရှိပါတယ်။ သဘာဝဆေး(၁) – ဆားရေနွေး ညဘက်ချောင်းဆိုးနေရင် ရေနွေးတစ်ဖန်ခွက်ထဲ ဆား ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်ဖျော်ပြီး...
ချောင်းဆိုး ဘာကြောင့် မပျောက်ရတာလဲ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ချောင်းဆိုးတဲ့ ရက်ကြာနေလို့ စိတ်ညစ်နေသလား။ ချောင်းဆိုးပျောက်အောင် အမျိုးမျိုးလုပ်ပေမယ့် သက်သာ မလာလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား။ အကြောင်းရင်း (၁) အအေးမိခြင်း၊ တုပ်ကွေးမိခြင်းဖြစ်ပြီးနောက် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ယားယံခြင်း နာတာရှည်ချောင်းဆိုးဝေဒနာဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းအများစုက မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ အအေးမိဝေဒနာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါ၊...